नवलपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं १ मा ११५१ मत खस्यो, मतगणनाको तयारी
| ७ मंसिर २०७८, मंगलवार १८:५६ , प्रकाशीत
नवलपुर, ७ मंसिर ।
नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत नवलपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं १ मा ११५१ मत खसेको छ । ११६२ प्रतिनीधि रहेकोमा साझ अबेर सकिएको मतदानमा ११५१ मत खसेको मतदान अधिकृत चुडामणि शर्माले जानकारी दिनुभयो । दलदलेको साहारा पार्टी प्यालेसमा मतदान भएको थियो । अब १ घण्टापछि मतगणना सुरु हुने शर्माले जानकारी दिनु भयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भोट हालेपछी मतदान प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
क्षेत्रिय सभापतिमा अमृत भट्टचन र कमल पराजुली प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । अमृत भट्चन नेतृत्वको प्यानलबाट सचिवमा युवा नेता दाताराम घिमिरे र शालिकराम सापकोटाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सहसचिवमा टिकाराम सापकोटा र प्रदिपकुमार मग्मी रहेका छन् । कमल पराजुली नेतृत्वको प्यानलबाट सचिवमा अमृतकुमार श्रेष्ठ र शिवलाल सापकोटाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सहसचिवमा तारानाथ अधिकारी, तेजप्रसाद घिमिरेले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नवलपुर क्षेत्र नं. २ मा पनि मतदान सकिएको छ । नवलपुर क्षेत्र नं. २ मा सभापतिमा सूर्य गुरुङ र जगत बहादुर कार्की नेतृत्वमा प्यानलै उम्मेदवारी रहेको छ । सूर्य गुरुङ महेन्द्र ध्वज जिसी निकट अर्थात रामचन्द्र पौडेल प्यानलका हुन् भने र जगत बहादुर कार्की विष्णु कार्की निकट अर्थात शेरबहादुर देउवा प्यालनका हुन् ।